Thursday September 10, 2020 - 13:33:57 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Codbixinta ka dhacday deegaanka ismaamulka Tigray ayaa dhabbaha u xaaraya in, ugu dambayntii, wixii la oran jirey Itoobiya ay kala dhaqaaqi doonto.
Waxa 9kii Sebtember oo ku beegnayd shalayto cobixin u dareeray bulshada Tigray iyaga oo doonaya in ay qabsadaan codbixintii ka dhici lahayd Itoobiya bishii Juun ee sannadkan, maamulka Abiy Axmedna uu dib u dhigay muddo ku siman 13 bilood.
Haddaba khuburada aad ugu dhuun daloola siyaasadda Geeska Afrika, gaar ahaan tan Itoobiya ayaa saadaalinaya in dhacdadani ay gogolxaar (pretext) u tahay in qaybo dhawr ah oo ka mid ah dawlad wadaagga Itoobiya (Eithiopian federal) ay iyana ku dayan doonaan oo ay dhabbaha soo hayaan in ay qabsadaan codbixinno taas la mid ah, ugu dambayntiina awood siyaasadeed u siinaysa in ay qolo waliba goonni isu taagto.
Tallaabadan ay ku dhaqaaqeen ismaamulka Tigraygu ayaa u muuqata awood sheegasho ay u sheegteen dawladda Itoobiya oo uu u taliyo Abiy oo u muuqda mid siyaasiyan iyo caskariyanba fashilan, marka loo eego xaaladda uu ku jiro hadda.
Asnake Kefale oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda magaalada Addis-Ababa oo u warramayey laanta Afsoomaaliga ee Codka Maraykanka (VOA) ayaa sheegay in xilligan la joogo ay Tigray tahay dawlad si muuqata u taagan (de-Facto), balse aan si sharci (de Jure) ah u ahayn dawlad, inkasta oo uu ka deyriyey sida ay u sii badbaadi karto, balse waa aragtida uu qabo.
Asxaabta siyaasadda ee ku tartamayey hoggaanka Tigray ayaa ka kooban shan xisbi oo kala ah: TPLF, Baytoona, Sawiid, Asamba iyo TIP. Xisbiga TIP ayaa isagu qaba aragti aad u fog, kuna salaysan goonni isu taag ay Tigray gooni isu taagto, dal madaxbannaana ay noqoto mustaqbalka dhow. Abiy Axmed ayaa isagu imminka wajahaya siyaasad xumo iyo fashil ku salaysan hoggaanka isku haynta qowmiyado badan oo aan la isku hayn karin haddii aan xoog loo adeegsan, taas oo hadda meesha ka baxday, ka dib markii uu Abiy awoodi waayey in uu hor isataag ku samayn waayey codbixinta Tigray, taas oo dalkii Itoobiya la oran jiray imminka ka dhigtay laba dal oo kala ah dawladda Tigray iyo Itoobiya.
Hoos Ka Daawo Video muujiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee Itoobiya
Golaha Sare ee Arrimaha Islaamka Itoobiya cabasho ka muujiyey dilalka lagu hayo Culimaa'udiinka.